किन फुकुवा हुँदैछन मदिरा निषेधित स्थानीय तह ? « News of Nepal
किन फुकुवा हुँदैछन मदिरा निषेधित स्थानीय तह ?
मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेका जिल्लाका केही स्थानिय तहहरुले मदिरा फुकुवा गरेका छन् । महिला तथा वालवालिका माथी हुने हिंसाको कारक तत्व मानिएको मदिरालाई पुर्णरुपमा निषेध गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेका स्थानिय तहहरु अहिले मदिरालाई फुकुवा गर्ने निर्णयमा पुगेका छन् ।
जिल्लाको मालिकार्जुन गाउँपालिकाकाले मदिरा मुक्त गाउँपालिका बनाई सामाजिक कुरिती न्युनिकरण गर्ने भन्दै गाउँसभाबाट मदिरा निषेधित गाउँपालिका बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
मदिरा मुक्त गाउँपालिका बनाउन गाउँसभाबाट निर्णय गरेको एक वर्ष नवित्दै गाउँपालिकाले मदिरा फुकुवा गरेको छ ।
गाउँपालिकाले आफुले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा मदिरा फुकुवा गर्नु पर्ने स्थितीमा पुगेको हो । गाउँपालिकामा मदिरा निषेधि गरिएको भए पनि मदिराको खुलेयाम रुपमा विक्रि वितरण हुन थाले पछि गाउँपालिकाले मदिरालाई निषेध भन्दा पनि फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आफ्नो क्षेत्र तथा गाउँ ठाउँलाई मदिरा मुक्त बनाउन गाउँपालिकाले मदिरा निषेध गरेको भए पनि स्थानियले गाउँपालिकाले गरेको निर्णय नमान्दा मदिरा फुकुवा गर्नु पर्ने अवस्था आएको मालिकार्जुन गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह धामीले बताए । स्थानिय सरकारले बनाएका निति नियमलाई कार्यान्वयन गराउनमा स्थानियले साथ नदिदा निर्णय कार्यान्वयमा समस्या सिर्जना भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
महिला, वालवालिका तथा घरेलु हिंसाको कारक तत्व मानिदै आएको मदिरालाई व्यवस्थित गर्न पछिल्लो समय जिल्लाका सबै जसो स्थानिय तहले जमर्को गरेको भए पनि त्यो सफल हुन सकेको छैन् । याहाका बुद्धिजिवी वर्गका व्याक्तीहरु नै मदिरा व्यवसाय खोल्न पाउनु पर्छ भन्ने भावनाका भएका कारण पनि निर्णय कार्यान्वयनमा निकै समस्या भएको स्थानिय तहहरुले जनाएका छन् ।
यस्तै दुहुँ गाउँपालिकाले पनि मदिरा निषेधित गाउँपालिका बनाउने उद्देश्यका साथ गाउँसभाबाट मदिरा निषेध गाउँपालिका बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर सो निर्णयको कार्यान्वयन हुन नपाउदै मदिरा फुकुवा गर्ने स्थितीमा अहिले गाउँपालिका पुगेको छ ।
मदिरा निषेध गरी गाउँपालिकालाई स्वच्छ र शान्त गाउँपालिकाले बनाउने अध्यक्ष पुलेन्द्र बहादुर कार्कीको चाहाना रहेको भए पनि निर्णय कार्यान्वय गराउन नसक्दा समस्या झन बल्झिएको छ ।
जिल्ला सदरमुकाम खलंगामा रहेको महाकाली नगरपालिका मदिरा व्यवस्थित गर्ने कुरामा बेला बेला असफल हुदै आएको छ । मदिरा व्यवस्थित गर्न गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गराउन याहाका मदिरा व्यवसायीहरुले नगरपालिकालाई साथ नदिदा नगरपालिका मदिरा व्यवस्थित गर्ने कुरामा संधै असफल हुदै आएको छ ।
नेपाली जहाज युरोपको आकाशमा कालो सूचीमा
सिन्धुपाल्चोक केन्द्रविन्दु बनाइ ४.८ रेक्टर स्केलको